धेरैबेर फोनमा कुरा गर्दा श्रवणशक्ति गुम्न सक्छ ! - SangaloKhabar
धेरैबेर फोनमा कुरा गर्दा श्रवणशक्ति गुम्न सक्छ !
काठमाडौं । तपाईँ घन्टौं फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ वा एयरफोन लगाएर चर्को आवाजमा गीत सुन्नुहुन्छ ? बेलैमा सचेत हुनुहोस्, श्रवणशक्ति गुम्न सक्छ । यस्तो बानी परेका मानिसमा उमेर नपुग्दै कान नसुन्ने, कान बज्ने तथा कम सुन्नेलगायतका समस्या पाइएको छ ।
उपचार गर्न अस्पातल पुगेका कानका बिरामीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज इएनटी विभागका कानरोग विशेषज्ञ डा. रवीन्द्रनाथ प्राधांगका अनुसार कानको समस्या आउने धेरैमा सुन्ने क्षमता कम भएको पाइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २०, २०७३ समय: ७:३८:२३